Mwari Anotikumbira Kuti Tinyengetere — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
w15 10/1 p. 5
Mwari Anotikumbira Kuti Tinyengetere
Mwari Anonzwa Minyengetero Yako Here?
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha (Yeveruzhinji)—2021
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha—2014
Nyanzvi dzinoongorora maitiro evanhu dzakacherechedza kuti kune vakawanda chaizvo vanonzwa vachida kunyengetera. Vanosanganisira vanhu vanoti hakuna Mwari nevaya vanoti hazviiti kuziva kuti ariko here kana kuti haako.* Izvi zvinosimbisa chokwadi chokuti vanhu vakasikwa vaine chido chekunamata. Jesu akati: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu,” kana kuti zvokunamata. (Mateu 5:3) Imwe nzira yekuita izvi ndeyokugara tichikurukura naMwari.
Muna 2012, tsvakurudzo yakaitwa nePew Research Center yakaratidza kuti zvikamu 11 muzana zvevanhu vemuUnited States vanoti hakuna Mwari nevaya vanoti hazviiti kuziva kuti ariko here kana kuti haako, vanombonyengetera kamwe chete pamwedzi kana kupfuura.